Iindaba - Ukwakhiwa banikwe itheko, Umaleko banikwe Pipe, Isefu Steel Pipe, Bonisa Truss, Event Stage, China banikwe, China Banikwe, Ukuphakamisa itheko, zokhuseleko Screen, Ukunyuka itheko, itheko coupler,
Ukuphoswa okuncinci, umahluko omkhulu! Kutheni le nto sinyanzelisa ekusebenziseni inkqubo yeglasi yamanzi? (2)
Ukuphoswa okuncinci, umahluko omkhulu! Kutheni le nto sinyanzelisa ukusebenzisa inkqubo yeglasi yamanzi? (2)
Iindaba zokugqibela sithetha ngexabiso le- isinxibelelanisi seglasi yamanzi Amaxesha ama-2 esisixhobo sokudibanisa isanti.
Ke ,amaqabane amaninzi Ndiza kuziva ndibhidekile, ngoba nangoku khetha inkqubo yeglasi yamanzi?
Makhe ndikubalisele ngezinye zeengxaki zesanti izihlanganisi Kwimarike yangoku:
01. Imbonakalo embi
Umgangatho wokubonakala kwelinye icala kukubonakala kwayo yonke imveliso ihlwempungokuthe ngqo, ileja iya kuba yinto eninzi yokuvuza kokuvuza kwi Ukunyibilika inkqubo, kuba ye umphezulu urhabaxa kakhulu, iza ku ukunciphisa ubomi benkonzo yemveliso.
02.Uninzi lwama-pores angaphakathi
Ingxaki pores zangaphakathi ikakhulu kubonakala kwiinkalo ezimbini:
1) Iipore zikhona kwingcambu ye- isinxibelelanisi, eya kuthi unobangela I-pores kwi-weld seam kwaye ichaphazela umgangatho we-welding xa udibanisa nombhobho;
2) Ubukho be pores bunciphisa amandla apheleleyo e isinxibelelanisi, kubangela umonakalo kwi isinxibelelanisi kwaye zikhokelela kuludwe olupheleleyo incwadi yemiyalezo.
03.m ngakumbi Burr, ulawulo olungqongqo olulinganiselweyo
Uninzi lwe-burrs in isinxibelelanisi Ayichaphazeli kuphela ukubonakala komgangatho, kodwa ichaphazele nokukrwela kwabasebenzi ngexesha lokusebenza. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba iya kuchaphazelaukumisa. Ukuba i-burrs yileayisuswanga kwaye yakhiwe ekuhambeni kwexesha, umgangatho ngokubanzi emva welding ndiza kuthanda ayinakuhlangabezana nomgangatho, ochaphazela umgangatho kunye nokhuseleko lweemveliso.
Ngokwamava ethu, i isinxibelelanisi seglasi yamanzi inkqubo ekubunjweni ekubunjweni, yinto enye yokubumba, ulwakhiwo ngokubanzi luzinzile; Kwinkqubo yesanti isinxibelelanisi, ukungunda kwahluliwe.
Ngokusekwe kwezi zizathu zingasentla, abathengi abaninzi baya bekhetha iglasi yamanzi isinxibelelanisi ngexabiso leyunithi ephezulu.